Isitoreji Sokuhamba Kokusebenza Kwamafu | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
Ikhaya » Ukudalwa kokuqukethwe » Isitoreji Sokugeleza okusekwe Cloud
Isitoreji Sokugeleza okusekwe Cloud
UTom Coughlin, uCoughlin Associates, Inc., www.tomcoughlin.com
Ukugqashuka kwe-COVID-19 kuholele ekukhanselweni kuka-2020 Ukubonisa kwe-NAB njengomcimbi obonakalayo eLas Vegas. Esikhundleni salokho, abathengisi abahlukahlukene ababezobe benemibukiso futhi bethula ngezinhlelo zokulondolozwa kwedijithali kanye nesoftware yemithombo ehlukahlukene yezokuxhumana nokuzijabulisa bathuthela Emcimbini Oyi-Virtual, oqala ngasekupheleni kuka-Ephreli kuya kuJuni 2020, kufaka phakathi I-NAB Bonisa Veza (nabshow.com/express/).
Ngokucabanga kokufudukela emsebenzini okude okwenziwa ngabasebenza embonini abaningi, ukuhamba kwefu okusetshenziswe ngamafu sekufanele kakhulu. Ukuhlukaniswa kwabantu njengamanje kuye kwasheshisa ukuthambekela kokuhamba okusekwe ngamafu, okungahle kuqhubeke ngisho nangemva kokuba sesisebenze ndawonye futhi. Ngaphandle kwefu, iningi labasebenza ngeM & E belizoba ngaphandle komsebenzi.
Ukuhamba komsebenzi okwenziwe ngamafu kwakhula ngokudumile nangaphambi kobhadane lwe-COVID-19. Ku-2020 HPA Retreat, izinkampani eziholayo ezihlinzeka ngezinketho zokuhamba kwamafu kanye nabaqondisi abanolwazi, bakha ividiyo emfushane yokuhamba komsebenzi esekelwe efwini, I-Losterhosen elahlekile.
Embikweni wami wonyaka we-2019 wokuGcinwa kwedijithali kuMidiya Nezokuzijabulisa, ngabona ukukhula okukhulu kwisitoreji samafu ukuxhasa imidiya nokuzijabulisa (bona ngezansi). Embikweni we-2020 ukukhula kwesitoreji samafu kuzoba ngaphezulu kakhulu ngenxa yokusetshenziswa okuningana ngemuva kokuqala kwesifo esiwumshayabhuqe, futhi ngokususelwa kulokho okuhlangenwe nakho, ukukhula okusheshayo emsebenzini okude nokusakazwa kwamafu. Ubhubhane lusebenze njengesikhuthazi sokusetshenziswa kwefu.
Le ndatshana ibheka intuthuko yokuhamba komsebenzi okwenziwe ngamafu, kanye nezixazululo zesitoreji sedijithali ukusekela lokhu ukuhamba komsebenzi. Qaphela ukuthi yize izinkampani eziningi ebezizokhombisa ku-2020 NAB zibamba iqhaza emicimbini ebonakalayo, le micimbi isatshalaliswa ngokuhamba kwesikhathi, kusukela ngo-Ephreli kuya kuJuni 2020. Ngizokhuluma kulesi sihloko ngezinto engithole ngazo ngesikhathi sokubhala. .
I-Amazon Web Services (AWS) yayine umcimbi wayo we-NAB uqobo, egxile emisebenzini eqhelile evela ekudalweni kokuqukethwe nokukhiqizwa kweposi ngokusabalalisa.
Izinkampani eziningi zeM&E bezisebenzisa izinsiza ze-AWS okubalwa kuzo iTurner, i-Untold, iDwala kanye neRoll Hall of Fame, Fox, HBO, Hotstar ne-Eurosport. I-AWS ibingenye yezinkampani ezi-5 enikezwe umklomelo we-Engineering EMMY wokuhlinzekwa kwemithombo yemithombo ye-Cloud0based media ukuze kuthathwe okuqukethwe, ukuphathwa kanye nokulethwa.
I-AWS inikezela ngezinsizakalo ezintathu ezintsha ukusiza ngemithwalo yemithombo yezindaba eqatha. Lezi yizindawo zasendaweni ze-AWS, ukuphuma kwe-AWS kanye ne-AWS Wavelength. Izindawo Zendawo zinikezela ngezindawo eziphansi ngokuba seduze nabasebenzisi bakho bokugcina ngezinsizakalo ze-AWS. Imiphumela ye-AWS iletha i-rack yomkhiqizo we-AWS esikhungweni sedatha yakho ukuze uthole isipiliyoni sefu elihlanganisiwe esakhiweni noma efwini. I-AWS wavelength inika amandla abathuthukisi bohlelo lokusebenza leselula ukuletha izinhlelo zokusebenza ngamadijithi we-millisecond enombolo eyodwa.
I-AWS inikeza izindawo zokusebenzela ezibonakalayo zeWindows noma i-Linux ezibandakanya ukufinyeleleka kwe-NVIDIA T4 Tensor Core CPUs kanye ne-NVIDIA Quadro worksstations ngezindleko ezifanayo. Iphinde ihlinzeka ngokuhlinzekwa kuma-AWS kungaba nge-hybrid noma ifu lomphakathi eligcwele kusetshenziswa i-AWS Thinkbox Deadline noma isisombululo sakho sokuphatha osithandayo. Yomibili le mikhiqizo inikezwa ukukhokha njengoba uyisebenzisa.
Ngo-2019 Fox wathi kuzosebenzisa i-AWS ngentambo futhi satellite Ukusakaza kusetshenziswa ukuphuma kwe-AWS kwezinye izakhiwo zayo zokukhiqiza kanye nendawo yendawo ye-AWS. Lesi sithombe esingezansi sibonisa ukuthi ikusasa lokusakazwa okubukhoma kusetshenziswa i-AWS kungabukeka njengoba igumbi lokulawula ukukhiqiza liqhubekela efwini.
I-AWS ibuye yaxoxa nokusatshalaliswa kokuqukethwe okuphansi kwe-latency isebenzisa i-AWS Elemental MediaStore (imithombo yezokuxhumana eyenziwe kahle kanye nomthombo wemvelaphi). Kwa-NAB 2020 AWS anikezela ngokudluliselwa kwe-Elemental Live chunked, ukwesekwa kwe-DRM nokufakwa kwesikhangiso se-side-side Ad. Le nkampani iphinde yathi i-Elemental MediaConvert yayo ne-Accelerate Transcoding ingenza ukuba ukufakwa kwe-AV1 okuyinkimbinkimbi kube lula kakhulu namuhla. Lesi sibalo esingezansi sibonisa ukuthi i-AWS Elemental MediaLive, ibhokisi lokungenayo lemidiya engosini, inganikeza kanjani ukufinyelela kwevidiyo bukhoma.
Qumulo ihlinzeka ukugcinwa kwefayili le-hybrid ifu nezinsizakalo zedatha nokunikelwayo amavidiyo athile we-NAB abonakalayo. Imboni ye-M&E ibe ngomunye wayo Qumuloizimakethe eziqondisiwe. Le nkampani imemezele ukuthi i-Adobe Premiere Pro ne-After Effects, ngokuhambisana Qumuloizinsizakalo zefayela, zinika amandla amathimba wokudala ukudala nokuhlela ukuboniswa kwevidiyo esebenzisa isitoreji samafu ngamazinga afanayo wokusebenza, ukufinyelela nokusebenza njengezindawo zomsebenzi studio. QumuloI-CloudStudio ivumela amaphrojekthi ahambayo abekade eboshelwe endaweni yesakhiwo ngokomzimba efwini lomphakathi kuwo womabili amapulatifomu e-AWS ne-GCP.
Esithangamini sabahlaziyi Qumulo sakhuluma kabanzi ngokuthi kanjani Qumulo, I-Adobe neTeradici inganikeza ukuhlelwa kwefu okuhlanganisiwe njengokukhonjisiwe kusibalo esingezansi. Le nhlanganisela ikwazile ukuhlinzeka ukukalwa okungenamkhawulo, ukuhlelwa kokusebenza kwevidiyo ephezulu ngokubambisana, imiphumela yokubuka nokuqhuma okunikela ngokuhlaziya nokubonakala kusetshenziswa Qumulo amathuluzi okuhlaziya.
I-Quantum imemezele izithuthukisi ngohlelo lwayo lwefayela le-StorNext ne-software yokuphathwa kwedatha eklanyelwe ukwenza okuqukethwe kwamafu kutholakale kalula, ngesivinini sokufunda nokubhala esithuthukisiwe kakhulu kunoma yisiphi isitolo samafu nezinto. Izici ezintsha ze-StorNext 6.4 zisiza ukunika amandla amacala we-hybrid-Cloud kanye namacala wokusebenzisa amafu amaningi, ukuletha ukuguquguquka okukhulu kwabezindaba nokuzijabulisa nakwezinye izindawo ezinzulu zedatha.
I-StorNext 6.4 ifaka izinto ezizichaza ngokwakho ukwenza okuqukethwe kwamafu kutholakale kalula, kunika amandla ukuhanjiswa kwe-hybrid-Cloud entsha. Iklayenti libhala amafayela ohlelweni lwefayela le-StorNext, bese lisuselwa kunqubomgomo, i-StorNext likopisha amafayela efwini lomphakathi noma langasese, inenketho yokufaka imethadatha eyengeziwe. Amaklayenti we-non-StorNext nezinqubo zokuhlala amafu manje angafinyelela izinto ngokuqondile, adonsa imethadatha entsha enwetshiwe. Ngaphezu kwalokho, ukusebenza kwe-StorNext 6.4's-fibered multi-threaded put / uthole ukuhlinzeka ngokuthuthuka kwe-5X kuya ku-7X ngokusebenza okukodwa okuhlanganisiwe.
INetApp iyayenza eyayo umcimbi we-NAB obonakalayo ngoJuni 2. Umcimbi wabo uzokhombisa izixazululo zabo, nabalingani ukunikela ngamazinga amasha wokusebenza nokusebenza kahle futhi bakhe indwangu yemininingwane yemidiya esekela ukuqhutshwa komsebenzi kwe-M&E.
IDell Technologies nayo yayinayo umcimbi ongabonakala okukhombise amathuluzi wabo wokugcina nokugcina wemidiya nokuzijabulisa kokuhamba komsebenzi kanye nemibukiso nge-Adobe ene-Dell Isilon isitoreji sokuvumela ukuqhutshwa komsebenzi wokusebenzisana. Ividiyo yabo efunwa kakhulu ikhulume ngokubaluleka kokufinyelela metadata futhi uchwepheshe wakwa-Adobe ukhulume ngokuthi uDell Isilon usize kanjani ngokusebenza kwe-Adobe's Productions (okuyingxenye yePremier) ukuhamba komsebenzi. Qaphela ukuthi ngo-2020 inkampani inezinhlelo zesiphakeli se-Isilon neplatfomu yefu nge-OneFS.Next. Le nkampani ithe ngo-Ephreli kulindeleke ukuthi ikwazi ukusho okuningi ezinyangeni ezimbalwa.
UDell futhi waba nesilayidi esikhuluma ngecebo labo ledatha yokuqala. Leli isu eliphelele lokuhambisa imininingwane phakathi kwamafu, yangasese, amafu amaningi namafu omphakathi.
UDell wenza umsebenzi omkhulu ngokuhamba komsebenzi osuselwa ku-IP (SMPTE 2110) nemikhiqizo yayo. Ngesikhathi sokuqoshwa kwabo on-line isazi kusuka IABM Uveze ukuthi ochwepheshe be-M&E baphendukele ekusebenziseni izingobo zomlando ngoba kwaba nzima ukuthola i-video entsha ngabalingisi. UDell usebenza neGreyymeta ukunikeza ukufinyelela okulula kumininingwane efakwe kungobo yomlando ngokusebenzisa imethadatha eyenziwe nge-AI isebenzisa ipulatifomu yayo ye-Iris. Ngezansi kunesifaniso esivela kwisethulo sabo esise-inthanethi esibukwayo esiphakeme kakhulu sesikhulumi sokugcina sikaDell nezinhlelo zesoftware.
Avid enikeziwe izinsiza eziku-inthanethi zokwenza umsebenzi we-M&E ukude. IMarquis Broadcast inikeza izinketho zomsebenzi ezikude ezihlanganisa Avid Isitoreji se-Nexis ngesitoreji samafu se-wasabi (ukuthola isipele) nomsebenzi wokubambisana.
ISpectra Logic isungulwe kahle embonini ye-M&E njengomhlinzeki wokugcina kungobo yomlando. Kubo izethulo ze-NAB ezibonakalayo babebonisa ukusetshenziswa okuthuthukile kwesango labo lokugcina into iBlackPearl. IBlackPearl iyisisekelo sohlelo lokugcina oluhlanganisiwe lukaSpectra oluhlanganisa ukuxhumana nefu lomphakathi ne-hybrid, isitoreji esinezindawo eziningi kanye nokugcinwa kwento esekwe ku-HDD nokugcinwa komtapo wezincwadi we-magnetic tape.
I-Riobroker, eyethulwe ku-2019 NAB iyinjini yedatha yokuxhuma nokuxhumana. Lokhu kuvumela ukwengeza imethadatha kanye nenkomba yokuqukethwe nokuhlinzeka ngenjini yokufudukela eBlack Pearl kanye nokubuyiselwa okuyingxenye kwefayela. Lokhu kufaka phakathi ukuhamba kwedatha kuye noma ukusuka ngefu lomphakathi. Ukungeza i-RioBroker node kungangezwa ukukhulisa ukutholakala nomthamo nendawo yegama lomhlaba jikelele. ISpectra's StorCycle ivumela ukuphathwa okufundisiwe kwawo wonke amafa wakho wokugcina axhunyiwe.
U-Wasabi wenze iM&E enye yezimakethe zayo ezigxile ekugcinweni kwamafu okungaphansi kwenkampani. Le nkampani isebenza nabalingani abaningi besiteshi ukuletha isitoreji samafu njengengxenye yamaphrojekthi abo. Inkampani ithi noma yimuphi u-3rd iphathi ye-AWS S3 ehambisanayo nephathi noma ipulatifomu kufanele isebenze ngesitoreji se-Wasabi. Le nkampani ithi izicelo ezingama-200+ zibhalwe njengo-Wasabi ongasebenzisana njengoba kukhonjisiwe ngezansi. Le nkampani ithi ukusetshenziswa kwayo kohlelo lwamafayela esakhelwe injongo wanamuhla ngobuchwepheshe be-hardware obuholayo kunikeza isitoreji esikalini se-exabyte.
Le nkampani ine-tier eyodwa yesitoreji sokusebenza okuphezulu kwe- $ 5.99 / TB / mo engenazindleko zokwebiwa futhi ngaphandle kwenkokhiso yezingcingo ze-API. Ngo-2020 u-Wasabi wanikela ngesitoreji sokukhokha njengawe- $ 5.99 ngenyanga noma isitoreji esigciniwe esisuka ku-50 TB saya ku-10 PB ekukhuphukeni okungaguquki ngaphezulu kweminyaka eyi-1,3 noma engu-5 ngokukhokha ngaphambili. Inkampani le ithi isitoreji sayo siphephile futhi sinokuqina okuphezulu nokutholakala kwayo futhi kufaka nokuhambisana neMotion Photo Association of America.
UWasabi unesakhiwo sendawo yonke e-1 Wilshire e-LA ngohlelo lokusebenza lokudluliselwa kwe-Wasabi Ball le-100 le-TB ukuze kutholakale kalula okuqukethwe okukhulu. Le nkampani ibuye igcinwe oGwini lwase-US East Coast kanye naseYurophu (Amsterdam) nase-Asia (Japan). Ngaphezu kwalokho i-Wasabi ivulekele ukuxhumana oku-1 ne-10 kwe-GbE okunikezelwe kwisitoreji sayo samafu.
I-Backblaze, enye inkampani ephansi yokugcina amafu ebheke esikhaleni se-M&E, imemezele ukuthi manje isisekela i-S3 ecosystem enkulu ngokukhipha okusha, ama-API ahambisana ne-S3.
Lokhu kusho ukuthi abadali bokuqukethwe bangahamba kalula ukusuka kwabanye abathengisi befu abalondoloziweyo bebuyela emuva ekubekweni kwamafu kwe-B2 okungabizi kakhulu. Ukwethulwa kwe-BackBlaze kusekelwa i-IBM Aspera ngokudluliselwa kwedatha okusheshayo nokusakazwa kumabanga futhi I-Quantum isebenza nge-Backblaze yokuthwebula, ukudala nokwabelana ngokuqukethwe kwedijithali. Muva nje i-Backblaze ithe inokuningi ngaphezu kwe-Exabyte yesitoreji efwini labo.
I-Object Matrix ihlinzeka ngokugcinwa kwento kwabezindaba kanye nezinhlelo zokusebenza zokuzijabulisa. Le nkampani ithi "I-Object Matrix igxile ekuhlinzekeni izisombululo ezivumela amaqembu wokuqamba nokukhiqiza akwazi ukuzenzela ukufinyelela kokuqukethwe okuvela emsebenzini noma ukude kusuka kunoma yikuphi." Kuthuthukisa ukufinyelela kokuzenzela wena kokuqukethwe okuvela kulondolozo lwasekhompyutheni ukusiza ngokusebenza okukude kwe-M&E nokubambisana.
I-Editshare yenza ipulatifomu yayo yokuphathwa kwemidiya eyi-Flow ikude kuze kube ngu-Julayi 1st ukuze usize ubuciko bokusebenza obusebenza ekhaya. Le nkampani ibigxile kakhulu ekunikeleni ngephutha ekukhiqizeni ividiyo ngefu ku-2020 NAB. Lokhu kufaka phakathi ubuchwepheshe obusha be-EFS kanye ne-Flow ukusekela ukukhiqizwa kokugcina efwini ngokuhlanganiswa okujulile ngamathuluzi wokudala anjenge-Adobe Premiere Pro wokusebenza kokusebenza ngokusebenzisana kanye nokusetshenziswa okusebenzayo kwe-AI ukukhulisa umlando wokugcina umlando. I-EFSv iyiplatifomu entsha enikezela ukuhlelwa kwevidiyo nokugcinwa okwenziwe ngokweqile okushiwo yinkampani okusiza amakhasimende ngokuguquguquka komthungo kusuka ekushintsheni kwe-on -gceke kokusebenza kuya kokukhiqizwa kokusebenza kokude okukude efwini.
Le nkampani yathi "Amandla e-EFS 2020 ashesha ngokushesha Hlela ukwabelana indawo yokugcina kanye namanethiwekhi asendaweni, efwini nasekuhlelweni kwe-hybrid. Isebenzisana ngokuphelele ne-Flow 2020, i-EFS 2020 inika amandla izinhlangano zabezindaba ukuthi zikwazi ukusebenza ngokubambisana okuningana, zivikele abasebenzi bokuqamba kusuka ekuxakaneni kobuchwepheshe obuyinkimbinkimbi ngenkathi kuhlonyelwa amaqembu ezobuchwepheshe isethi ephelele yamathuluzi okuphatha imidiya. "
IScale Logic ixoxe ngeNAS yayo enikwe amandla ifu engasebenza ngamathuluzi amakhulu wokukhiqiza asebenzisa inkampani entsha yeNVMe based NX2 / ZX ene-onboard Sync, Backup kanye ne-Archive kulabhulali ye-tape yendawo noma kumtapo wezincwadi wamafu.
Ezinye izinkampani ezahlukahlukene zanikela ngeminikelo ehlobene nokugeleza kwefu kufaka phakathi Masstech enikeza usizo lokufaka isitoreji samafu ekuhambeni komsebenzi nasekuhlinzekeni ukuhlela okukude. Le nkampani ithe lo mkhiqizo unika amandla ukuhlela okukude nakho konke kuhlelo lokusebenza elilodwa lokusebenza kwamavidiyo amancane, aphakathi nendawo amakhulu.
Umqedazwe we-COVID usheshise ukuthambekela kwemithombo yezokuxhumana akude nokuzijabulisa, ngokubambisana okukugcina ochwepheshe be-M&E nabaqashi babo ebhizinisini. Imikhiqizo yokulondolozwa kwasendaweni ayihambi kepha kunesidingo esikhulu sokwabelana nokuhlaziya okuqukethwe ukuze unikeze amandla ukuhamba okukude. Amathuluzi asuselwa kumafu azoba yingxenye ebalulekile yamaphrojekthi wemidiya wesikhathi esizayo, akhuphule ukusetshenziswa kwe-hybrid kanye nokugcinwa kwamafu omphakathi.
UTom Coughlin, uMongameli, uCoughlin Associates ungumhlaziyi wesitoreji wedijithali kanye nomeluleki webhizinisi nobuchwepheshe. Uneminyaka engaphezu kwengu-39 embonini yokugcina idatha enezikhundla zobunjiniyela nezokuphatha ezinkampanini eziningana. AbakwaCoughlin Associates baqala ukukholwa, bashicilele izincwadi kanye nemibiko yemakethe nezobuchwepheshe futhi babeka emicimbini esetshenziselwa ukugcinwa kwedijithali. Ungumbonisi wesitoko ojwayelekile kanye nomnikeli wememori we forbes.com namawebhusayithi enhlangano ye-M&E. Ungumfo we-IEEE, Umongameli Wangaphambilini we-IEEE-USA futhi usebenza nge-SNIA futhi SMPTE. Ukuthola imininingwane eminingi ngoTom Coughlin nezincwadi zakhe nemisebenzi iya ku www.tomcoughlin.com.
 Isitoreji seDijithali sika-2019 kuMbiko Wezindaba Nezokuzijabulisa, Abangani be-Coughlin, ka-2019, tomcoughlin.com/product/digital-storage-for-media-and-ent Entertainment-report/
Ngaphambilini: Amanethiwekhi we-TVU ajoyina i-Consortium Ukunikeza Ukutholwa Okuphezulu Kokubukhoma Ukutholwa Komlando Kwezentengiselwano Kwezentengiselwano Nge-US Space Agency
Olandelayo: Ama-Injineli we-PSSI Ngokuphumelelayo Ukudlulisela Okunzima KwaseMelika Idol Finale